Alahadin’ny KPMS 2021 – FJKM
FIARAHABANA APOSTOLIKA : (Filip 1: 2)
 FISAORANA SY FIDERANA :
– Ataon’ny Mpitarika: APOK 22: 17, 20
– Iombonana: SALAMO 84: 4-8
– Hira 39: 1, 2, 5 Faingana ry Mpanjaka
– Vavaka fiderana sy fisaorana.
 FANAMBARANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA :
– Fitarihan-teny: JAKOBA 5: 7
– I TIMOTY 4: 13-14a, 16
– Hira 432: 1 Mandra-piavin’ny Tompo.
– Vavaka Fifonana
– Hira: 582: 1 Ry Jesoa ô tahio izahay.
 FAMELANKELOKA :
– Fitarihan-teny: JAONA 10: 10b
– SALAMO 85: 1a, 2-3, 10
– Hira 16: 3 Avia ry voavonjy ô!
– Fanekempinoana laharana fahaefatra.
 ASAN’NY FIANGONANA:
– Filazandraharaha sy fanentanana samihafa.
– Famakiana ny hafatra avy amin’ny KPMS.
– Rakitra : Hira SAMPANA
– Fanolorana ny rakitra: Hira 45: 4
 FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA :
– Fotoana ho an’ny ankizy sy tanora.
– Hira 480: 1, 3 Mamin’ny foko.
– Vakiteny :
SAL 16 : 7-11, LIO 1 : 46- 55 , ROM 8 : 18-25.
– Hira 351 : 1 Tsy hangina re ny hoby.
 VAVAKA FANGATAHANA faranana amin’ny
“Rainay Izay any an-danitra………………….”
 ASA VAVOLOMBELONA
 Famaranana: Antema 5 Indro ny aron’ny mandanao
– Tsodrano: I TESALONIANA 5: 23-24
– Hafatra: MATIO 28: 19a-20b
– Doxologie: APOKALYPSY 5: 13
Sal.16. 7 – 8
IREO FEPETRA MAHATSARA NY SAFIDIN’NY MINO
Raha tiana ho tsara ny fanapahankevitra eo anatrehan’ny safidy samihafa omen’ny fiainana, indrindra amin’ny zava-dehibe sy maika ary indrindra ihany koa amin’ny fotoan-tsarotra, dia tsy maintsy mahafantatra tsara ny vaovao ilaina rehetra, manana fotoana ampy tsara hieritreretana, fa ambonin’izany mila manana Mpanolontsaina mahay sy azo antoka, tsy iza izany fa Andriamanitra. Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina mihitsy no manolontsaina. Mijoro ho vavolombelona amin’izany eto ny Mpanao Salamo.
ANDRIAMANITRA NO MPANOLOTSAINA (Conseillor) : and 7-8
« Hisaotra an’i Jehovah Izay manome saina ahy aho; ary na amin’ny alina aza dia mananatra ahy ny foko. Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah, fa eo an-kavanako Izy, ka dia tsy hangozohozo aho. »
Andriamanitra no Mpanolontsaina, Izy koa no manome ary Izy no lova. Mipaka any amin’ny fo ny tolo-tsaina omen’Andriamanitra. Ny fo no olombelona anaty, ao amin’ny fo no misy ny fitiavana, misy ny fihetsehampo, misy hevitra mifangaroharo ary misy ny eritreritra. Miainga amin’ireo ny faharesen-dahatra sy ny fanapahan-kevitra ary ny safidy. Ny fon’ny olombelona dia sady mandray fitiavana avy amin’ny manodidina no mizara ho an’ny manodidina ihany koa. Ny endrika isehoan’ilay safidy dia ao ny fisaorana, ao ny fanolorantena, ao ny fibanjinana.
« Hisaotra an’i Jehovah izay nanome saina ahy aho….. »
Andriamanitra no tsaroana fa nanolo-tsaina (nanome saina ahy), mananatra, tsy mamela ho tafandry mandry, tsy mamela anao handeha amin’ny làlan-diso, manitsy. Anontaniana foana Izy isaky ny fanapahan-kevitra lehibe ho raisina ary Izy no Mpanolontsaina lehibe indrindra : and 8a : « Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah, fa eo an-kavanako Izy ».Rehefa Andriamanitra no manolo-tsaina dia misy vokany tsara eo amin’ny maha – olombelona manontolo.
2-MISY VOKANY EO AMIN’NY MAHA OLONA MANONTOLO NY TOLONTSAINA OMEN’ANDRIAMANITRA.
Rehefa raisina ao am-ponao sy ekenao ny fikasana tsara atolotr’Andriamanitra dia misy vokatra tsara eo amin’ny maha- olombelona manontolo izany. Ny singa mandrafitra ny olombelona dia ny fo, ny fanahy, ny saina, ny vatana ka eto dia tsapan’ny Mpanao Salamo avokoa amin’ny maha-olombelona azy manontolo ny sitrapon’Andriamanitra ekentsika ho fiainana (and 9) :
« Izany no ifalian’ny foko sy iravoravoan’ny fanahiko; eny, ny nofoko aza hitoetra tsy manana ahiahy »
Tena tsapanao ny vokatry ny fanarahana ny tolo-tsaina omen’Andriamanitra ary mitondra fifaliana ho an’ny fiainanao izany. Ny fifaliana no hany fihetsehampo miabo ary ny fifaliana faratampony dia ny fifaliam-pamonjena na ny fahasambarana . Andriamanitra irery no manome an’io ao amin’i Jesoa (Deo 33 : 29): « Sambatra ianao, ry Isiraely. Iza no tahaka anao, ry olona voavonjin’i Jehovah, Ampingan’ny famonjena anao sy sabatry ny voninahitrao! Hikoy anao ny fahavalonao. Ary ianao handia ny fitoerany avo. ». (Mat 5 : 1-14). Tsy ny fonao ihany no mahatsapa fifaliana fa ny fanahinao koa miravoravo. Ny nofonao tony (and 9b) « Ny nofoko aza hitoetra tsy manana ahiahy ».
Ny fanahy dia misy ifandraisany amin’ny fo ihany, ny fo fitiavana fa ny fanahy mankany amin’ny voninahitra izay fitambaran’ny fahaiza-manao tsara ateraky ny fanomezam-pahasoavana izay nomen’Andriamanitra. Tanteraka eto mihitsy ny tsodranon’Andriamanitra ao amin’ny I Tesaloniana 5 : 23-24. Ny nofo (ny vatana na ny tena) dia tsy singa hafa na mifanohitra amin’ny maha-olombelona marina araka ny Filozofia sy kolontsaina maro, anisan’izany ny Filozofia Grika ary na aty amin’ny Testamenta Vaovao aza dia mbola hita taratra eny ihany ny fampifanoherana ny nofo sy ny fanahy, fa ao amin’i Jesoa kosa dia Izy tonga nofo sady ho an’ny nofo : Gal 2 : 20 :
« Voahombo miaraka amin’i Kristy amin’ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko; fa izay ivelomako ankehitriny eo amin’ny nofo dia ivelomako amin’ny finoana ny Zanak’Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy ». Izany no manamafy fa mipaka ao amin’ny nofo ny fivelomana amin’ny finoana. Ka eto ny Mpanao Salamo dia mahazo toky, na manoloana ny fahafatesana aza, dia manana fanantenana fa hain’Andriamanitra ny mitahiry antsika (and 10) «Fa tsy ho foinao ho any amin’ny fiainan-tsi-hita ny aiko , tsy hamela ny Iray Masinao ho latsaka ao amin’ny lavaka Ianao » Efa taratry ny finoana an’i Jesoa Ilay nitondra ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty izany. (SAL 17 : 15, ASA 2 : 29-32)
3-MIANOKA AMIN’NY FAHATANTERAHAN’NY FAHASAMBARANA. (and 11)
« Hampahafantatra ahy ny lalan’aina Ianao; fa havokisam-pifaliana no eo anatrehanao ary fahafinaretana no eo an-tananao an-kavanana mandrakizay. »
Na dia fiainana mandalo aza ny fianantsika zanak’olombelona eto an-tany, rehefa mizotra amin’ny làlam-piainana na ny lalan’aina atoron’Andriamanitra ianao dia efa misantatra sahady ny voaloham-bokatry ny fiainana be dia be nentin’i Kristy ary natolony izay mino. Tanteraka ao amin’i Jesoa ity Salamo ity. Ny Mpaminany Isaia dia manambara hoe mitombo hery eny am-pandehanana (Isa 40 : 31) ary ny Mpanao Salamo ihany koa dia nilaza hoe : « Miampy hery eny am-pandehanana izy »(Sal 84 : 7). Voky andro sy afa-po ny miaina no anazavan’ny Testamenta Taloha azy. Tsy fiainana lava fotsiny fa tena fiainana nahafa-po, nahasambatra, izay ilay antsoina hoe : fiainana mandrakizay izay hita soritra eto ary tanteraka ao amin’i Jesoa : fiainana feno fifaliana, fiainana feno fahamasinana, fiainana feno fiadanana (Jao 14 : 6).
Raha tianao ho tsara miafara ny fiainanao dia meteza toloran’Andriamanitra, apetraho ho Mpanolontsaina anao voalohany Andriamanitra fa Izy irery ihany no tsy hamitaka anao ary miasa amin’ireo olona mahatoky manana an’i Jesoa Izy hanampiany anao. Ny maha-olombelona manontolo mihitsy no kendren’ny asam-pamonjen’Andriamanitra mitondra fifaliana maharitra sady madio . Izay ilay fahasambarana. Amen.
“Ampitomboina ho anareo anie ny famindrampo sy ny fiadanana ary ny fitiavana”. Amen
Misaotra an’Andriamanitra tamin’ny fombàny antsika.
Misaotra an’Andriamanitra ihany koa fa tanteraka soamantsara ny Synoda Lehibe faha XIX izay natao tany SAMBAVA ny 11 hatramin’ny 18 Aogositra 2021 teo, ary tamin’izany no mbola nanamafisan’ny Fiangonana FJKM indray ny mbola hanamafisàna ny fanohizana ity ady amin’ny SIDA ity ary koa nanindriana fa izay mety ho valanaretina rehetra miseho dia nomena ho andraikitry ny KPMS no mitarika ny Fiangonana amin’izany. Hita araka izany fa tsy mora ny asa ary koa tsy tokony ho mandrimandry manana aretina isika Fiangonana fa hanao ho vaindohan-draharaha ny fiarovana ny mpiara-belona indrindra ireo ankohonan’Andriamanitra eto amin’ny sahan’ny FJKM.
Na dia teo aza ny valanaretina COVID 19 sy ny olana maro naterak’izany dia mitohy hatrany ny fanatanterahana ny asa fijoroana vavolombelona ataon’ny Fiangonana ary isan’ny ratsa-mangaika ao anatin’zany ny KPMS/FJKM izay miezaka tokoa hanatratra ny vina eo ambany fitarihan’ny Tompo Jesoa. Tanteraka avokoa ireo fanofanana nokasaina nandritra ity taona 2021 ity tamin’ireo toeram-panomanana ho Mpitandrina . Vita soamantsara ny fanofanana ny TPM Ivato Fisintonana ny 10 sy 11 ary 12 Martsa 2021 – ny TPM Ambatonakanga : ny 12 sy 13 ary 14 Aprily 2021 – ny TPM Fianarantsoa ny 28 sy 29 Oktobra 2021-ny TPM Mandritsara ny 04 sy 05 Novambra 2021 ary namarana azy ny TPM Ambatondrazaka ny 16 sy 17 Novambra 2021.
Ny fanofanana tsy tanteraka dia ireo tao amin’ny IFRP noho ny fahateren’ny fe-potoam-pianaran’ireo Mpiomana ho Mpampianatra, ezahina hotanterahina haingana araka izay azo atao. Mitohy hatrany ny fiaraha-miasa akaiky amin’ireo fikambanana samihafa sy ny fanjakana ary manohy ny asa fitiliana, ny fandraisana an-tànana ireo marary sy ny fianakaviany; miara-miasa hatrany koa amin’ireo médecins referents (Dokoteram-panjakana miandraikitra manokana ireo PVVIH).
Isaorana manokana ireo Mpanohana ara-bola TOF sy PCUSA indrindra Rtoa ELIZABETH TURK izay manao ny ainy tsy ho zavatra, fa na dia any Amerika aza izy dia tsy mitsahatra ny manaraka akaiky ny asa tanterahina aty Madagasikara, mifandray tsy tapaka an-telefonina sy an-tsary mifankahita “Messenger” ka miezaka ny mandresy lahatra ireo mpamatsy vola mba hitohizan’ny asa tsy tapaka. Teo ihany koa ny fanohanana am-bavaka izay nataon’ny rehetra, ka na sarotra sy maro ny olana sedraina dia tantanin’ny Tompo ary omeny fanambinana sy fahombiazana hatrany ka tanteraka soamantsara ny asa. Manantitra hatrany ny fisaorana antsika mpiara-miombona antoka, mpiantsehatra, mpiara-manompo. Misaotra manokana ihany koa ny ambaratonga mpiahy dia ny Foibe FJKM na ny mpanapa-kevitra izany na ny mpanatanteraka.
Atolotray eto koa ireo Fiangonana izay nanohana ara-bola tamin’ny alalan’ny Rakitra izay anehoana fialan-tsiny sahady raha sanatria misy latsaka dia afaka manao fanamarihana mivantana aty amin’ny Biraon’ny KPMS.
Ny fanohanana ara-bola dia azo atolotra mivantana ao amin’ny Biraon’ny KPMS na arotsaka amin’ny kaonty BOA 00009 05020 1602281 0009 42 amin’ny anaran’ny KPMS/FJKM.
Manaitra antsika fa takonan’ity valanaretina vaovao Corona Virus ity ireo aretina samihafa ary anisan’izany ny tazomoka, raboka (tuberculose), peste, sns ary anisan’izany ny VIH SIDA izay samy mbola misy ary misy tena mahazo vahana aza satria hadino ny fiatrehana azy; koa samia mailo isika. Maniry antsika rehetra mba samy hanangana ny komity any amin’ny isan’ambaratonga misy antsika tsirairay avy (Synodamparitany-Fitandremana). Ny Mpitandrina rehetra moa dia efa nahazo fiofanana momba ny VIH SIDA avokoa, koa raha misy fiaraha-miasa ilaintsika dia afaka manatanteraka izany ny KPMS (fampianarana –fanofanana-fananganana ny rafitra). Afaka mifandray amin’ny mailaka kpms.fjkm@gmail.com na ihany koa amin’ireto findat ireto 033 14 477 16 na 032 07 536 86.
Dia ho tafatoetra ny fontsika miandry ny Tompo ary mangataka aminy handavorary ny zara-fanompoantsika amin’ny alalan’ny fanompoam-pivavahana izay tanterahintsika isam-pitandremana amin’ny Litorjia iombonana avoakan’ny Komity Foibe KPMS izay hatao ny Alahady 28 Novambra 2021.
Raha sendra misy ny fotoana mifanindry dia afaka manendry fotoana hafa hanatanterahana ny Alahady hitondrana am-bavaka ny asan’ny KPMS. Anasàna antsika ny fanarahana ny fandaharana asa vavolombelona ao amin’ny Radio Fahazavàna (88.6) isaky ny Alatsinainy fahatelo amin’ny volana amin’ny 07 ora sy 35 minitra alina.
Dia manentana antsika rehetra mba handray anjara mavitrika amin’ny hetsika ady amin’ny VIH SIDA izay fanao isan-taona manerana izao tontolo izao mandritry ny andro iraisam-pirenena hiadiana amin’ny VIH SIDA isaky ny voalohan’ny volana Desambra. Ary indrindra koa hanao ho zava-dehibe ny fanajàna ny fihetsika rehetra hisorohana ny fiparitahan’ny tsimokaretina COVID 19. Dia samy hitrotro am-bavaka isika ny Komity Foibe KPMS/FJKM izay hatao any Tsiroanomandidy ny 08 sy 09 ary 10 Desambra 2021 ho avy izao raha sitrapon’Andriamanitra.
Andriamanitra Raintsika anie hitahy antsika sy hiaro antsika, hampamirapiratra ny tavany amintsika ka hamindra fo amintsika, hanandratra ny tavany amintsika ka hanome antsika ny fiadanana ao amin’I Jesoa Kristy Tompontsika.
Ny KPMS/FJKM dia mirary Krismasy sambatra 2021 sy Taombaovao 2022 hahatonga antsika hino ny fifaliana ao amin’ny Tompo.
Amin’ny anaran’ny Komitim-pirenena miady amin’ny VIH SIDA sy ny Tsimokaretina samihafa.
Atoa RAZAFIMAHATRATRA Jean William, Mpitandrina
RAKITRA SY ADIDY 2020
IREO FIANGONANA NANAO RAKITRA ALAHADY KPMS 22 NOVAMBRA 2020
N° SP FITANDREMANA MARIBOLA (Ar)
1 SPAA12 FJKM Ziona Fanantenana Ahi/tsinanana 20.300
2 SPAA12 FJKM AMBATOROKA 66.500
3 SPAA10 FJKM AMBALAVAO ISOTRY 82.100
4 SPAA10 FJKM ANKADINDRAVOLA 30.000
8 SPAA10 FJKM SALEMA VAOVAO 30.000
6 SPAA10 FJKM AMBOHIDROA 48.600
7 SP35 FJKM Ziona Fahazavàna Sahilaza 16.300
8 SPAA10 FJKM AMBAVAHADITOKANA 59.820
9 SPAA12 FJKM AMBOHIMIANDRA 126.800
10 SPIA19 FJKM AMBATONAKANGA 100.000
11 SPAA11 FJKM AMBATOLOKANGA FIRAISANA 6.100
12 SPAIM15 FJKM AMPANGABE FAMONJENA 25.800
13 SPIA19 FJKM ANTANIMENA ANDREFANA 100.000
14 SP38 FJKM MANJAKATOMPO 9.300
15 SPIA19 FJKM AMBOHITRINIMANGA 20.000
16 SP03 FJKM AMBOHITRARIVO 23.800
17 SP FJKM ANKIRIHIRY 50.000
18 SP13 FJKM Ziona Famonjena Imerintsiatosika 212.700
19 SPAA12 FJKM ANONIMASINA ZIONA 69.600
20 SPAA10 FJKM AMBOHIJATOVO FITIAVANA 50.000
21 SP01 FJKM ANTANIMARINA FIDERANA 11.800
22 SPAA12 FJKM ANTSAHAMAINA 31.600
23 SP27 FJKM AMBOHIMIRARY 6.000
24 SP27 FJKM ANKOTRABE 3.800
25 SP26 FJKM AMBODIADABO 5.000
26 SP27 FJKM SANGANORO FANANTENANA 16.100
27 SPAA11 FJKM VONTOVORONA FANANTENANA 62.600
28 SPAA12 FJKM TRANOVATO FARAVOHITRA 666.000